Raràn’i Kambodja Ny “Cybercafé” Manakaiky Sekoly · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Desambra 2012 16:21 GMT
Vakio amin'ny teny Magyar, বাংলা, Français, Español, Italiano, Português, 繁體中文, 简体中文, srpski, ភាសាខ្មែរ, 日本語, English
Namoaka naoty ny Minisitry ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra Kambodjiana fa voaràra ny manorina cybercafé 500 metatra manodidina ny sekoly na trano fampianarana. Mandràra ireo cybercafé tsy handray ireo tanora latsaky ny 18 taona ihany koa ny filazana, izay nanipika fa marobe ireo loza ateraky ny aterineto tahaka ny fampihorohoroana, heloka ara-toekarena sy ny fanaparitahana sary sy lahatsary vetaveta, araka ny tatitra navoakan'ny Gazety mpivoaka isan'andro ao Kambodja.
Nilatsaka izany filazana izany volana vitsy taorian'ny filazana teo aloha manan-kery izay navoakan'ny governemanta fa tsy maintsy mametraka kamerà fitsikilovana (mpanara-maso) ireo cyberkafe ary manana rejistra fandraisana ny anaran'ireo mpanjifa sy mpiantso.
Mety hitarika amin'ny fanakatonana ireo cybercafe rehetra ao Phnom Penh ny fampiharana ny faritra tsy misy aterineto. Saritanin'i Licadho
Niteraka fihetseham-po marobe teo amin'ireo bilaogera Kambodjiana izany vaovao izany. Tharum Bun nanoratra tao amin'ny bilaogy VOA fa toa mikasa tsotra izao hanaisotra ny cybercafe rehetra ao Phnom Penh ny governemanta vaovao.
Nanambara tamin'ny teny somary tsy mazava ihany koa ny naoty fa tokony hijanona tsy hanao ireo lalao amin'ny aterineto ny olona.
Tep Sovichet, bilaogera 17 taona sy mpianatra ao Phnom Penh, nihevitra fa tsy manakana ireo mpianatra hilalao amin'ny aterineto eny amin'ny cybercafe ny fandraràna. Manohitra tanteraka ny filazana (fandraràna) izy.
Tsy ny cybercafé rehetra no toerana hilalaovan'ireo mpianatra lalao amin'ny aterineto, ary tsy voatery avy amin'ny cybercafé ny heloka amin'ny aterineto (cybercriminalité). Tsy ny mpianatra rehetra no mankany amin'ny cybercafé mba hilalao, fa mety hanao zavatra hafa na antony samihafa […] tahaka ny fanaovana ny enti-mody, fianarana zava-baovao sy fanaovana fikarohana avy amin'ny loharanom-baovao isan-karazany.
Araka ny voalaza ao amin'ny fanambarana, nangatahana ireo tompona cybercafe manerana ny firenena mba hanasonia fifanekena miaraka amin'ny Minisitera.
Khmerbird, bilaogera Kambodjiana hafa nanoratra tao amin'ny bilaoginy:
Tohanako tanteraka ny hevitra voalaza ao amin'ny naoty. Saingy raha ny hevitro, mba hifehezana ny lalao sy ny lahatsary vetaveta eny amin'ny cybercafe, tsy ilaina ny manakatona ireo cybercafe. Fanampin'izany, raha hampiharintsika izany fitsipika izany, mety ireo cybercafe rehetra ao Phnom Penh mihitsy no hikatona.
Araka ny voalaza ao amin'ny filazana, raha tratra eny amin'ny faritra mena ny cybercafe na misy fandikan-dalàna miseho ao aminy, “hakatona avy hatrany ilay toerana, ary hotazomina avokoa ny fitaovana rehetra, hosamborina ny tompony ary hoentina eny amin'ny fitsarana.”
Faine Greenwood, bilaogera mavitrika sy mpanao gazety monina ao Azia Atsimo-Atsinanana nanoratra tao amin'ny bilaoginy momba ilay fandraràna ny cybercafé tamin'ny 18 Desambra:
Eny tokoa, tsy mazava tanteraka ny mety ho fahefan'ilay “naoty” hanova zavatra eto Kambodja, na koa ny mety hahatonga izany ho lasa lalàna manan-kery. Saingy raha toa ka mandroso izany dia ho lasa karazana fambara mahasosotra kasain'ny governemanta Kambodjiana hamehezana ny fidirana amin'ny aterineto, izay mbola malalaka aloha ankehitriny, tahaka ny ohatra na ny zava-nitranga tao Shina ka mampanahy, namana be fahefana an'ny fitondran'i Hun Sen.
Urban Voice Cambodia, tetikasa sarintany ifandrimbonana ho an'i Phnom Penh, nanatontosa hetsika manohitra ny fandraràna ka niantso ireo vahoaka mba hampiditra ny anaran'ny cybercafe eny amin'ny faritra misy azy ireo ao anatin'ny habaka “Submit Report.” Araka ny kajikajy nataon'izy ireo, mety hikatona avokoa ny cybercafé rehetra ao Phnom Penh.
Vondrona mpiaro ny zon'olombelona Licadho nanohitra ilay naoty ihany koa:
Tsy vitany hoe tsy manam-pototra ara-dalàna ihany izany fanapahan-kevitra diso fihetsika hanakatonana ireo toerana ahazoana miserasera mora amin'ny aterieto fa fikasana mivandravandra hibahanana ny olona tsy hanana loharanom-baovao mahaelo tena sy avy amin'ny tambajotra sosialy